Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Baaritaanka Kansarka qanjirka 'prostate': Ragga, Waqtigu waa Hadda
Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga!
Nofeembar waa xilliga dhammaan ragga, oo ay ku jiraan mujaahidiinta,, si ay u qiimeeyaan caafimaadkooda. HALO Diagnostics, oo hormuud u ah ogaanshaha iyo daawaynta kansarka qanjirka 'prostate', waxay ku boorisaa ragga 45+ jira inay helaan baaritaanno joogto ah oo qanjirka 'prostate' ah.
Ku dhawaad ​​250,000 oo rag ah ayaa laga heli doonaa kansarka qanjirka 'prostate' sanadkiiba - ilaa 11,000 ka mid ah kuwa la ogaado waxay ku jiraan nidaamka Maamulka Caafimaadka ee Veterans oo keliya.
"Baaritaanku waxay yaraynaysaa heerka dhimashada kansarka qanjirka 'prostate' 25-30%," ayuu yidhi Dr. John Feller, ruug-caddaa iyo sarkaalka caafimaadka ee HALO Diagnostics.
Dr. Feller waxa uu ku taliyay in dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha ay is caawiyaan midba midka kale xasuuso muhiimada ay leedahay baadhista qanjirka 'prostate' ee ragga da'doodu tahay 50-75 (40-45 jir ee ragga khatarta sare leh). Waxa uu ku daray, "Daryeelida mujaahidiinta had iyo jeer waxay i xasuusisaa dareenka qoto dheer ee bulshada iyo ujeedada ay dhammaan mujaahidiintu wadaagaan."
Michael Crosby, oo ah Maamulaha Guud ee Mu'asasada Wacyigelinta Kansarka Prostate-ka ee Veterans kana mid ah bukaanada Dr.
Crosby ayaa ku dartay, "Balan ka samee dhakhtarkaaga daryeelka aasaasiga ah sanad walba jireed, oo ay ku jiraan baaritaanka dhiigga kansarka qanjirka 'prostate', baaritaanka dijitaalka ah, iyo dood ku saabsan welwelka kansarka qanjirka 'prostate'.
HALO Diagnostics waxay bixisaa baarista qanjirka 'prostate' goobta HALO oo ku taal Indian Wells, California, iyo Xarunta Laser Laser ee HALO ee Houston, Texas.
Baaritaanada waxaa ka mid ah:
• Tijaabada PSA: Waxaa lagula talinayaa dhammaan ragga 50+ jira iyo ragga 45+ ee leh taariikhda qoyska ee kansarka qanjirka 'prostate'.
• Multiparametric Magnetic Resonance Imaging (mpMRI): mpMRI waa aalad baadhis heersare ah oo saxsan waxayna kala soocaan kansarrada gardarada ah iyo kuwa qunyar u koraya.
• Biyo-soo-bax dareere ah: Baaritaan kaadi ah oo qiimeynaya halista ragga ee ah inuu ku dhaco kansarka qanjirka 'prostate' ee heer-sare ah. La isticmaalo ka hor mpMRI iyo ka hor baobsiga.